10 Aayadood oo Kitaabka Quduuska ah waa inaadan iloobin markaad xanuunsan tahay | TILMAAMAHA SALAADA
Bogga ugu weyn Aayadaha Baybalka 10 Aayadood oo Kitaabka ah waa inaadan iloobin markaad xanuunsan tahay
10 Aayadood oo Kitaabka ah waa inaadan iloobin markaad xanuunsan tahay
Maanta waxaan ka hadli doonaa 10 aayadood oo Kitaabka Quduuska ah oo ay tahay inaadan iloobin markaad jiran tahay. Markaynu nahay buka, waxa kaliya ee maskaxda ku soo dhacayaa waa sidaan u heli karno bogsasho. Xanuunku waa shay aad u xun. Mararka qaarkood waa nooc gaar ah jeesjees iyo tijaabinta rumaystuhu soo mari lahaa, xusuuso qisadii Ayuub ?. Xanuunka waxaa ka buuxa xanuun iyo murugo aad u badan. Waxaan baryayaa inaan midkeenna ku xanuunsan magaca Ciise.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad jiran tahay, halkan waxaa ah 10 aayadood oo Kitaabka Quduuska ah waa inaadan iloobin.
Ma jiraa mid idinka mid ah oo xanuunsanaya? Ha tukado. Ma jiraa qof faraxsan? Isagu ammaan ha ku gabyo. Mid bukaa ma idinku dhex jiraa? Ha u yeedho waayeellada kiniisadda, oo iyagu ha u duceeyeen, oo saliid ha ku mariyeen magaca Rabbiga.
Waxaa jira bogsasho xagga ammaanta ah. Markaan Ilaah ammaano, waxaan ka bogsannaa dhammaan noocyada cudurrada ama cudurrada. Waa inaad sidoo kale xusuusnaataa in ducada waxtarka leh ee kuwa xaqa ah ay waxtar leedahay. Layaab ma leh in Qorniinku ku waaniyo in qofka buka u yeedho waayeellada kaniisadda, ha u duceeyeen oo ha ku caddeeyeen saliidda magaca Rabbiga.
Waa inaadan iloobin in xanaaqku jebinayo harqoodka. Markii nin xanaaqay, harqoodkii cudurku wuu baabba'aa.
Ha cabsan, waayo, waan kula jiraa; Ha cabsan, waayo, waxaan ahay Ilaahaaga. Waan ku xoogayn doonaa, waanan ku caawin doonaa, oo waxaan kugu tiirin doonaa midigtayda xaqa ah.
Mararka qaarkood markaan xanuunsanno, waan argagaxnaa. Mararka qaarkood ma naqaanno waxa la sameeyo. Gaar ahaan markaan qaadanay daroogo oo ay u muuqato in xanuunka ama jirradu aysan iska dhammaan doonin. Mar walba ogow in Ilaah kula jiro xataa xanuunkaas xun oo uu kaa caawin doono.
Xanuunkaasi kaa adkaan maayo, markaad taas xusuusato, waxay ku siinaysaa awood aad kaga hortagto cudurka.
Oo baryada rumaysadku waxay badbaadin doontaa kii buka, oo Rabbigaa soo sara kicin doona. Oo hadduu dembiyo galay waa la cafiyi doonaa. Sidaa darteed midkiinba midka kale dembiyadiisa ha u qirto oo ha u duceeyo si aad u bogsataan. Baryada qofka xaqa ah waxay leedahay awood weyn markay shaqayso.
Xusuusnow in iimaan la'aantu aysan suurtogal ahayn in la raali geliyo Ilaah. Kan wax ka heli doona xagga Ilaah waa inuu rumaysto inuu isagu yahay Ilaah oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona. Markaad ku tukatid iimaan, cudurku wuu baaba'ayaa. Ilaah wuu cafiyi doonaa dembi kasta oo keenaya xanuun noloshaada ah waadna bogsan doontaa.
Si kastaba ha ahaatee, ka hor, waa inaad qirataa dembiyadaada. Xusuusnow kitaabka maahmaahyadu wuxuu leeyahay qofkii dembigiisa qariyaa ma liibaani doono laakiin kii qirta wuxuu heli doonaa naxariis. Qira dembigaaga, rumaysad ku bari oo waad ka bogsan doontaa jirradaas.
Sabuurka 30: 2-3
Rabbiyow Ilaahayow, adigaan kuu qayshaday oo adigu waad i bogsiisay. Rabbiyow, waxaad naftaydii ka soo qaadday She'ool, Waxaad igu soo noolaysay kuwa yaamayska ku dhaca.
Sayidku waa caawimaaddeenna haatan ee wakhtiga dhibaatada. Markay dhibka noloshu nagu soo boodo, waa inaynaan ka daalin inaan u ooyno caawimaad, caawimadeenu waxay ka iman doontaa xagga Rabbiga. Xusuusnow in Ilaah yahay kan soo celin kara caafimaad wanaagsan. Ha ku orod sterter helter meelo aadan gargaar ka heli karin, culayskaaga u gee sayidka xagga salaadda.
Sabuurka 103: 13-14
Sida aabbe carruurtiisa ugu naxo oo kale ayaa Rabbigu ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada. Waayo, isagaa garanaya qaab -dhismeedkayaga; wuxuu xusuustaa inaan boodh nahay.
Ibliisku waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu kugu soo dejiyo mid degdeg ah markaad jiran tahay. Waxaa laga yaabaa inaad qabtid dareen aad u xun oo ah in xanuunkaagu uusan dhammaanayn Tani waxay ku abuuri kartaa qalbigaaga cabsi aan fiicnayn.
Ogow tan nabadana ogow, Ilaahay ayaa kuu naxariisan doona. Haddii aabbahayaga adduunku u dhaqmo si sax ah si uu u muujiyo naxariista marka aan u baahanno mid, sidoo kale waa aabbahayaga jannada ku jira.
Kanu waa sabuur 41: 3
Rabbigu wuxuu isaga ku tiiriyaa sariirta buka; xanuunkiisa waxaad ku soo celinaysaa caafimaad buuxa.
Ilaah waa soo -celiye weyn. Wuxuu yiri wuxuu soo celin doonaa sanadihii ay dirxiga naga qaateen. Sidoo kale wuxuu kaloo ballanqaaday inuu nagu soo celin doono caafimaad buuxa. Isagu waa kan awooda inuu ina sii hayo, Isaga oo keliya ayaa awood u leh inuu soo celiyo caafimaadkii wanaagsanaa wuxuuna ballanqaaday inuu taas samayn doono. Ha cabsan, waayo, Ilaah baa kula jira.
Waxaa mahad leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, oo ah Aabbaha naxariista leh iyo Ilaaha gargaarka oo dhan, kan naga qalbi qaboojiya dhibaatooyinkayaga oo dhan, si aannu ugu awoodno inaan ku raaxaynno kuwa dhibaataysan dhibaato kasta iyo nasashadan annaga qudhayadu Ilaah baa na qalbi qaboojiya.
Ilaah waa gargaarre. Wuxuu awood u leeyahay inuu na qalbi qaboojiyo wakhtiga aan dhibaataysan nahay. In kasta oo uu jiro xanuun aad u xun oo jirro ah, qalbigaagu wuxuu ku heli doonaa nabad xagga Rabbiga haddii aad aamminto Rabbiga oo aad isaga wax walba isaga uga tagto si uu u maareeyo.
Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa. Harqoodkayga dushayda ku qaata oo wax iga barta; Waayo, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, oo rarkayguna waa fudud yahay.
Naftaadu uma baahna nasasho gaaban marka aad xanuunsan tahay. Waxaad u baahan tahay uun wax kaa qaadi doona xanuunka oo ku siin doona nasasho sanqadh leh. Kuwo badan xitaa ma xasuusan karaan markii ugu dambeysay oo ay seexdeen habeen wanaagsan xanuun aan dhammaanayn. Qorniinku wuxuu leeyahay, ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, waan idin nasin doonaa. Hadda waad taqaan meesha ku habboon ee aad ka heli karto nasasho, u tag rabbiga salaadda.
Waxaan u malaynayaa in waxyaalaha wakhtigan la joogo lagu xanuunsadaa ayan istaahilin in lala simo ammaanta laynoo muujin doono.
Waxaad tihiin dahab dab dhex mara. Marka dahabka ku jira qaab ceeriin ah la farsameeyo, wuxuu ka soo baxaa foornada isagoo ah khasnad la qiimeeyo. Sidaas oo kale Ilaah baa kuu diyaarinaya wax weyn. Farxad weyn baa jirta in la ogaado in wax walba ay si wadajir ah wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa Ilaah jecel.
Xanuunkan hadda jira waxba ma aha marka la barbar dhigo farxadda la soo bandhigi doono.
Kanu waa sabuur 50: 15
I bari maalinta dhibi jirto; Waan ku samatabbixin doonaa, adiguna waad i ammaani doontaa.
Ilaah had iyo jeer wuxuu rabaa inuu isu muujiyo inuu yahay boqorka. Markaad dhib ku jirto, Rabbiga barya oo waad badbaadi doontaa.
article Previous5 Sababood oo ay tahay in Masiixi kasta Masiixiyiinta ku wacdiyo
Next article5 Sababood Waa Inaad Ku Dadaashaa Inaad Ilaahay Si Wanaagsan U Ogaato
20 Dhibcood Salaada Cabiraadaha Ramadaanka Biyaha Biya
30 Salaadda cibaadadu waxay tilmaamaysaa koritaanka aan loo baahnayn ee uurka ilmaha
Ducada Badbaadinta Caruurta